Isiseko se-Twitter: Ungayisebenzisa njani i-Twitter (yabaQalayo) | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 4, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kusekutsha kakhulu ukubiza ukuphela kwe-Twitter, nangona mna ndiziva ngathi baqhubeka nokwenza uhlaziyo olungaphuculiyo okanye lomeleze iqonga. Kutshanje, basusile ukubala okubonakalayo okukhoyo kumaqhosha abo entlalontle kwiindawo. Andikwazi ukucinga ukuba kutheni kwaye kubonakala ngathi inokuba nefuthe elibi kuthethathethwano xa ujonga ukugcwala kwe-Twitter kwiziza zemilinganiselo ephambili.
Kwanele ukukhalaza… masibone izinto ezintle! Ubutyebi bedatha yexesha lokwenyani kwi-Twitter ayinakuthelekiswa nanto kwi-Intanethi. Ngelixa i-Facebook isenokuba yingxoxo kwi-Intanethi, i-Twitter iyaqhubeka nokuba yintliziyo kwimbono yam. Amagqabantshintshi e-Facebook kunye nokucoca uninzi lwedatha, ngenxa yoko ukusetyenziswa kunye nokuzibandakanya kuthathwe kakubi. Akunjalo kwi-Twitter.
Yintoni eyenza iTwitter yahluke
I-Twitter ngumjelo wedatha oqhubeka ukubhabha. Okukhona ulandela ii-akhawunti zakho, kokukhona usiya ngokukhawuleza umlambo. Kodwa ayicocwanga, ayijoliswanga, kwaye ihlala ibonakala. Kwaye ngokungafaniyo namanye amaqonga ezentlalo, iiakhawunti onqwenela ukuthetha nazo zingeneka. Phosa nje @iqosweb kwaye ungabamba ingqalelo yam kwaye ubhalele ngqo kum. Kuphi enye into enokwenzeka kwi-Intanethi? Kwaye ukuba ungathanda ukwenza uphando, khangela nje igama usebenzisa i-hashtag, njenge #mgcwabo.
Bhalisa -Kwaye uzame ukufumana isiphatho esikhulu se-Twitter ngaphandle kokugxininisa kunye nokudityaniswa okunzima. Ayizizo zonke izinto eziphambili ezithathiweyo; Sisoloko simangalisiwe kukuba sisenako ukufumana izibambo ezichanekileyo zabaxumi bethu. Ndingacebisa kakhulu ukuba zombini iakhawunti yakho kunye neakhawunti yecandelo kunokuba ubambelele ngaphezulu kokubini. Ngophawu, ukunyuselwa kulindeleke ngakumbi kunakwiakhawunti zobuqu apho unokucaphukisa abantu abazama ukukulandela.
Setha iProfayili yakho -Akukho mntu uthembayo okanye ulandela i-icon yeqanda, ke qiniseka ukongeza ifoto yakho kwiakhawunti yakho kunye nelogo yenkampani yakho. Thatha ixesha lokwenza ngokwezifiso isikimu sakho sombala kwaye ufumane umfanekiso mhle ongasemva oya kuthi ubambe umdla wabantu.
Gcina iBio yakho imfutshane kwaye imnandi! Ukuzama ukufaka ii-URLs, ii-hashtag, ezinye iiakhawunti kunye neenkcazo ezimfutshane azinyanzelisi. Nantsi ingcebiso yam - buyintoni ubungcali bakho kwaye yintoni ekwenza wahluke? Beka kwi-bio yakho kwaye abantu baya kukufumana kwaye bakulandele ngophando.
Khuphela iiNkqubo zikaTwitter
Nokuba ukwi-desktop, i-smartphone okanye ithebhulethi, kukho indalo Isicelo se-Twitter Lindela wena! Ukuba ufuna ukuphuma konke, unokukhuphela kwaye uqalise ngawo TweetDeck -Ipulatifomu ebanzi egcwele zonke iintsimbi kunye neempempe.
Tweets -I-Twitter ixoxe ngokwandisa inani labalinganiswa bee-tweets ngaphaya kweempawu ezili-140. Ndiqinisekile andinathemba lokuba, uninzi lobugcisa kunye nomtsalane we-Twitter kukusetyenziswa ngokukhawuleza kwe-tweet eyilwe kakuhle. Kufana nokubhala ihaiku; kuthatha ukuziqhelanisa kunye nengcinga ethile. Yenze kakuhle, kwaye abantu baya kwabelana kwaye balandele.
Sebenzisa iiHashtag -Ukuphindaphinda ukubandakanyeka kwakho ngokukhetha ubuncinci i-hashtag, ezimbini zibhetele. Ukuba ufuna ukwenza ezinye uphando lwe-hashtag, sidwelise itoni yamaqonga (iRiteTag ipholile ngokwenene!). Sebenzisa ii-hashtag ezifanelekileyo kuya kukufumana njengabasebenzisi be-Twitter abaphanda iqonga.
Khulisa ukufikelela kwakho kwi-Twitter
Khangela iinkokeli zeshishini lakho kwi-Twitter, zilandele, wabelane ngomxholo wazo, kwaye uzibandakanye nazo xa unokongeza ixabiso kwincoko.
Khangela abathengi bakho kwi-Twitter, balandele, ubancede, uzibandakanye nabo, kwaye uphinde ubhale umxholo wabo ukwenza ubudlelwane obungcono bokusebenza.
Musa ukuba sisinambuzane. Thintela amaqonga emiyalezo azenzekelayo, ubhalele abantu ngokungeyomfuneko, kwaye usebenzise khulisa umlandeli wakho amacebo. Ziyacaphukisa, kwaye zifakela amanani akho ngaphandle kokubonisa ukuba uqhuba kakuhle kangakanani.
Nyusa xa unika ixabiso
Unomcimbi ozayo? Ishedyuli yeeTweets ezibala ukuya kumnyhadala neengcebiso malunga nendlela abalandeli bakho abaza kuxhamla ngayo ngokuzimasa.
Nika izaphulelo xa unako, i-Twitter ithanda ikhowudi enkulu yekhuphoni okanye isaphulelo.
Sukukhuthaza nje, bonelela ngexabiso. Ukumamela imicimbi yabalandeli kunye nokubonelela ngeengcebiso esidlangalaleni kuya kuhlawula izabelo.
Khumbula ukuba iiTweets zibhabha… xa unento enkulu onokuyaba, yabelana ngayo amaxesha ambalwa.
Hlanganisa iWindowsPress kunye ne-Twitter
Iifolthi zamaSahlulo zoLuntu ezilula -Ikuvumela ukuba wabelane, ujonge kwaye wandise ukugcwala kwabantu ngokubulala ngokwezifiso kwaye kubahlalutyi Iimbonakalo.
Kwaye ukuba ungathanda ukuwupapasha umxholo wakho kwi-Twitter, i Iplagi yeJetpack ukwazisa into kuyenza ngokugqibeleleyo!
Khumbula, i-Twitter yimarathon, hayi i-sprint. Khulisa oku kulandelayo ngokwasemzimbeni kwaye ekuhambeni kwexesha uza kubona izibonelelo. Ngokufana nokudibanisa umdla, awuzukuthatha umhlala phantsi emva kweetweets zakho ezimbalwa zokuqala. Le infographic evela lesforce inikezela ngengqondo eyongezelelweyo… andiqinisekanga ukuba uyakuba yincutshe (ukuba kukho into enjalo), kodwa licebiso elilungileyo.
tags: khulisa abalandeli bakhohashtagsindlela yokusebenzisa i-twitterPhinda ubhaleweposiTweetdeckTwitterUsetyenziso lwe-twitteriziseko ze-twitterI-infographic ye-twitterukufikelela kwi-twitter
Ngaba abathengisi banokuthi baXhamle njani kwiNdawo yeHlabathi yezoQoqosho kwiKrisimesi?
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2015 ngo-5: 13 AM
Izixhobo ezintle zabantu abakhangela imithombo yeendaba zentlalo kunye neengcebiso ezisisiseko ze-SEO…qhubeka nomsebenzi olungileyo!